Ceni: « Tsy misy ny hala-bato na ny hosoka… » | NewsMada
Ceni: « Tsy misy ny hala-bato na ny hosoka… »
Nitondra fanazavana ny teo anivon’ny Ceni, manoloana ny fanehoan-kevitra tato ho ato. “Mandeha mahitsy sy ara-dalana ny nataonay. Tsy midoka tena sy tsy miaro tena izahay amin’izany. Tsy nahitana fahasamihafana ny valin’ny fampitahana natao teo amin’ny solontenan’ny kandidà tety Alarobia. Tsy nahitana hosoka na hala-bato teto amin’ny Ceni sy ny SRMV ”, hoy Razafindrabe Ernest, omaly. Na izany aza, niaiky ny tenany, niseho ihany ny hadisoana madinika sy lafiny teknika mety diso na koa hadisoana amin’ny tsipelina. “Tsy misy fifidianana tsy ahitana diso kely izany. Tsy izy rehetra koa anefa izany hadisoana izany fa tranga manokana ihany”, hoy ihany izy. Nanteriny fa mitady fitoniana sy filaminana ny vahoaka aorian’ny fifidianana mba hitondra ho any amin’ny fampandrosoana. “Tsy mijanona amin’ny fifidianana ny tantaram-pirenena”, hoy ihany ny eo anivon’ny Ceni.
Tsy mitombina ny hala-bato bevata
Etsy andaniny, nilaza ny solontenan’ny kandidà laharana faha-13, Rasoamaromaka Hery fa manana zo hanao fampitahana ny K25 na tsy araka ny tokony ho izy aza izany. “Aoka tsy ho entina amin’ny fanakorontanana ny vahoaka izany. Mazava fa 500 000 ny elanelan’ny vaton’ny roa tonta. Ekena fa niseho ny tsy fahatomombanana nefa tsy hoentina ilazana izany fa nisy hala-bato bevata tao. Tsy misy afenina eto fa avelao ho fantatry ny vahoaka ny marina… Mbola afaka mitory sy mangata-panazavana eny amin’ny HCC izy ireo raha tsy vita eto amin’ny Ceni”, hoy izy.
Tsy tokony ho maika hamoaka voka-pifidianana
Nanitrikitrika kosa ny avy amin’ny K25 amin’ny alalan’i Ninie Donia fa tsy tokony ho maika ny hamoaka voka-pifidianana vonjimaika ny Ceni, anio. “Betsaka ny lesoka hita. Nitombo ny isan’ny mpifidy, voamarika mialoha ny biletà tokana… Tokony hodiovina avokoa aloha izany ary hazava amin’ny vahoaka”, hoy izy.
Tsiahivina fa tokony hamoaka ny voka-pifidianana vonjimaika, anio tolakandro ny eo anivon’ny Ceni raha tsy misy ny fiovana.